ရက်သတ္တပတ်၏နေ့တိုင်းစျေးပေါသောအရက်သောက်ခြင်းအတွက် TAR ဖနောင့်လမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
ရက်သတ္တပတ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစျေးပေါသောက်သုံးရန်တစ် ဦး က Tar ဖနောင့်ရဲ့လမ်းညွှန်
သငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုနေ့ကိုရှိခြင်းလျှင် - သို့မဟုတ်ရဲ့ဝန်ခံကြကုန်အံ့, ရက်သတ္တပတ် - လျှင်, သင်အကြိုက်ဆုံး Chapel Hill အရက်ဆိုင်မှာအအေးတရက်သောက်နေစဉ်ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းထက်ဖြည်ဖို့မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဤတွင်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစျေးပေါကောလိပ်အရက်သောက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများပါပဲ။
Sup Dogs သည်သင်၏တနင်္လာနေ့ဘလူးအတွက်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နေ့ကနောက်ကျောနောက်ကျော4အတန်းပါဝငျလြှငျ, သငျသညျ Mug Night နှင့်အတူမျှော်လင့်ဖို့တစ်ခုခုအမြဲရှိသည်လိမ့်မယ်။ တနင်္လာနေ့တွင် Sup Dogs တွင် ၃၂ အောင်စအထိပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်အသွေးစုံလင်သောယူဆောင်လာနိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်နှစ်သက်သောဘီယာသို့မဟုတ် cider ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂ သို့မဟုတ် ၃ ဒေါ်လာသာရနိုင်သည်။ သငျသညျ buzz ရပေမယ့်လည်းလုံ့လရှိသူလူအစုအဝေးနှင့်ဒိန်ခဲ tots ကဝိုင်းခံရလိမ့်မယ်!
အင်္ဂါနေ့ကဆိုလိုတာက Thequila အင်္ဂါနေ့ The Library မှ! $2Tequila ရိုက်ချက်များနှင့်စာကြည့်တိုက်၏ရိုင်ဖယ်ကဲ့သို့အကအခုန်များနှင့်အတူသင်၏ groove ရယူပါ။ သင့်အတွင်းရှိ Dancing Queen ကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေနိုင်သည့်အစောပိုင်းကသင်စာမေးပွဲအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ Plus အား, အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ညာဘက်ဘေးက Benny ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တ ဦး တည်းအဘို့အစစ်မှန်တဲ့နှစ်ခုပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သူကဒီမှာမင်မှာချစ်ရာသခင်သည် Pint ညအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ တစ်ပတ်ကိုပိုင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်လှည့်ပြီးသင်ဟာဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာသာရှိပြီးဖန်စီပိုဖန်နှင့်အတူဘီယာနှင့်မပြည့်သည့်ခွက်ကိုသင်ရရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အနည်းငယ်အပြီးတွင်သင်သည်သင်၏အထင်ကြီးဖွယ်ပိုင့်ဖန်ခွက်စုဆောင်းမှုကိုဖော်ပြရန်ကောင်းမွန်သောစင်ပေါ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ရေငတ်သောကြာသပတေးနေ့သည် Country Fried Duck အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ (၃) အဖုံးရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းအထူးသောက်ခြင်းကထိုက်တန်သည် - မည်သည့်သောက်စရာမဆိုဒေါ်လာ ၂.၅၀! ဤသည် LIT ရဲ့ပါဝင်သည်, ဒါကြောင့်သတိထားပါ။ ဒေါ်လာ ၂.၅၀ တန် LIT ဖြင့်သင်၏နံနက် ၉ နာရီအတန်းကိုမေ့နေချိန်တွင်သင်ကညတစ်ညတွင်ကခုန်နိုင်သည်။ သင်ပြုလုပ်နေသည့်နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်အခန်းဖော် fuck ဆိုတဲ့ချင်
သောကြာနေ့သည်ဖန်စီခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ နှင့် Tru Deli & ဝိုင်မှာ $4ချွတ်ဘို့စပျစ်ရည်ကိုအပြည့်အဝပုလင်းနှင့်အတူတစ် ဦး အေးမြထားပြန် Vibe ခံစားထက်ဖန်စီခံစားရရန်မပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
စနေနေ့ရဲ့တစ်နေ့လုံးအိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်အတူစတင်ရပေမယ့်ဝေးသင်၏တစ်နေ့တာသောက်သုံးခြင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရမသာ။ ကာရိုလိုင်းနားကော်ဖီဆိုင်တွင်သင်သည် Long Island Ice Tea ကိုဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာဖြင့်သာရနိုင်သည်။ တခါတရံလူတွေက CCS မှာဘားတစ်ခုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်၊ အဲဒါက Franklin Street fave ကြောင့်ရှက်စရာပဲ။
R&R မှဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာသာကျသောအနက်ရောင် mimosas များနှင့်ယှဉ်ပါကသီတင်းပတ်ကုန်ဆုံးရန် / စတင်ရန်ပိုကောင်းသောနည်းလမ်း။ ရှေ့သို့သွားပြီးသင်အရသာပူနွေးနေသောလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ကိုပျော်မွေ့နေစဉ်မေ့သွားသည့်အိမ်စာကိုစတင်ပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းစာရွက်ကိုမဖွင့်ခင်သင်၏စာလုံးပေါင်းကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရန်သတိရပါ။ အခွင့်အလမ်းဟာရှမ်ပိန်မှာမင်းကိုအရာဝတ္ထုတွေရူးသွပ်နေတယ်။
ကောင်းပါပြီ, 21+ Tar ဒေါက်! အခုသင့်ရဲ့အလှည့်။ ကျေးဇူးပြု၍ တာဝန်ယူပြီးမောင်းပါ